अनुहारमा मजासँग थप्पड हान्नुस्- सुन्दर बन्नुस् - नेपालबहस
अनुहारमा मजासँग थप्पड हान्नुस्- सुन्दर बन्नुस्
| १५:४८:०९ मा प्रकाशित
२७ फागुन, काठमाडौं । छाला मानव शरीरको एक अंग हो । यो अंगले मानव शरीर बाहिरबाट ढाकिएको हुन्छ ।छालाको भित्रपट्टि सतहमा कलेजिन र ईलास्टिन नामका फाइबर हुन्छन् । यी फाइबरको काम छालालाई सपोर्ट दिने हो । तर, कलेजिन र ईलास्टिन फाइबर कम भएपछि छालाले बिस्तारै आफ्नो स्थान छोड्न थाल्छ । छाला कमजोर र केही लचकदार हुँदै जान्छ । कलेजिन र ईलास्टिनको मात्रा निकै नै कम भएपछि छालाले पूरै ठाउँ छोड्छ र चाउरी पर्छ । अनि तपाई हामी सबैलाई आफ्नो छाला राम्रो बनाउने चाहाना हुन्छ ।
तेसो त अहिलकोे व्यस्त जीवनशैली हामीहरु आफैंले आफैंलाई ध्यान दिनको लागि समेत समय निकाल्न सकिरहेका छैनौ । चाहे घरमा वा विदेशमा होस । कुनै न कुनै कारणले निराश छन्, आजका मानिसहरु । पछिल्लो समयको एक अध्ययनका अनुसार धेरै केटा या केटीहरूले गरेको गुनासो हो उनीहरुको छालामा कुनै चमक छैन । यसको लागि तपाईंले अत्यन्त धेरै मल्य तिरेर व्युटीपार्लरमा गएर आफ्नो छालाको सुन्दरता कायम राख्न उपचार गराइरहनु भएको त छैन ?
हामी सबैले आफूलाई सुन्दर भएको चाहन्छौ । त्यसमा पनि आफ्नो छाला सुन्दर भएको सबैलाई मनपर्छ । यदि यसो हो भने अब तपाई पनि बिना पैसा र झन्झट तपाईंको सुन्दरता थप्पड लगाएर बढाउन सक्नुहुन्छ । यो उपचार कोरियाली विज्ञहरुले हालै पत्ता लगाएका हुन् ।
के हो थप्पड मसाज ?
संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेको थाई मसाज थेरापिष्ट गाम पुक्कलानुनले पत्ता लगाए कि शरीरमा ऊर्जामूलक रेखाहरू छन् । यी उर्जामूलक रेखाहरु तपाईंको अनुहारमा पनि उपस्थित हुन्छन् । द्रुत थ्रटलिङ् वा थप्पडले मांसपेशीहरूलाई आराम दिन्छ र ऊर्जामूलक रेखाहरुलाई प्रसारित गर्छ ।
पटक–पटक अनुहारमा थप्पड हान्दा रगतको सञ्चार बढ्छ । त्यस्तै, छालामा उर्जाको स्तर पनि दोब्बर हुन्छ भन्ने विज्ञहरुको मत छ । जसले अनुहारमा लुकेको सुन्दरता फिर्ता गर्न मद्दत गर्छ । क्रिम र म्योस्चराइजर लागू गर्दा तपाईं यस्तो प्रविधिको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ । यसको लागि तपाईंले आफ्नो अनुहारमा जोशका साथ चड्कन मार्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै माथिदेखि तलसम्म क्रिम लगाउनु पर्छ ।
बढ्छ त थप्पडले सुन्दरता ?
छालामा रहेको साना प्वाल र झिल्लीहरु हटाउनुका साथै राम्रो रक्तसंचारका लागि पनि अनुहारमा थप्पड लगाउनुलाई उत्तम विकल्प मान्ने गरिन्छ । यस थेरापीले छालालाई नरम बनाउन मद्दत गर्छ । जबसम्म मांसपेशीहरू सक्रिय हुँदैन र रगत प्रवाह बढ्दैन ।
यसले छालामा कोलेजनको उत्पादनलाई बढाउने गर्छ । यसले गर्दा हाम्रो छाला भित्रैबाट चम्किलो हुन्छ । यद्यपि थप्पड लगाउनुको मतलव आफैले आफैलाई चोट र्पुयाउनु भन्ने चाहि होइन हैं ।
कोरिया र अमेरिकामा सुन्दर छालाका लागी थप्पड थेरापी धेरै लोकप्रिय छ । व्यक्तिहरूले यसलाई छाला नरम राख्न र डण्डिफोरहरु हटाउनका लागि धेरै प्रयोग गर्ने गर्छन् । तर, यो कुरा मनमा राख्नु आवश्यक छ कि यो गरिरहँदा तपाईंले आफ्नो अनुहारमा उही दवाव हाल्नु भयो ताकि अनुहारमा राम्रोसँग समाहित हुनेछ र अनुहारमा रक्तसञ्चार अझ राम्रो हुनेछ । जब तपाईं यो गर्न शुरू गर्नुहुन्छ, त्यसले हाम्रो छालामा फरक महसुस हुने गर्छ ।
यी कुराहरू दिमागमा राख्नुहोस
थप्पड हान्दा रक्त सञ्चारमा फाइदा हुन्छ भनेर हाम्रो छालामा समस्या हुने गरी नै थप्पड हान्नु पनि उपयुक्त होइन । रक्तसञ्चारको लागि हानिने सामान्य किसिमको थप्पडबाट हामीलाई त्यस्तो हानी त हुँदैन । तर, यसको अर्थ हाम्रो संवेदनशील छाला रातो बन्नेगरी भने थप्पड हान्ने गर्नु हुँदैन । यस्तो कामबाट भने हामीहरु जोगिनुपर्ने हुन्छ ।
पातारासी हिमालको काखमा स्याउ बगैँचा १४ घण्टा पहिले
दिल्लीका अस्पतामा अक्सिजनको अभाव, खेतबारीमै शवको अन्त्येष्टि गर्न अनुमति १३ घण्टा पहिले
संक्रमितको संख्या तीब्रगतिमा बढ्दै, सकभर घरभित्र बस्न डा. पाण्डेकाे अनुरोध २ दिन पहिले
सिभिल बैंकको कामू सीईओमा पोखरेल नियुक्त ५ दिन पहिले
‍प्रधानमन्त्री ओली शैली पछ्याउँदै कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाही ! ६ दिन पहिले
जन्मदिनकै दिन कलाकार मदनकृष्णलाई संक्रमण ४ दिन पहिले
मेडिकल सञ्चालक लागुऔषधसहित पक्राउ ६ दिन पहिले
आज निर्णायक वार्ताः नेपाल १ दिन पहिले
वाणीमा २० लाखको लागतमा अस्थायी प्रहरी पोष्ट ६ दिन पहिले
विद्यार्थीलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा शिक्षक पक्राउ ४ हप्ता पहिले
सङ्घीयता वास्तविकता हो, फर्किन सकिँदैन : सभापति देउवा २ वर्ष पहिले
भीषण वर्षा : बाढीले सडक, पुल र मन्दिर बगायो ! एक जना बेपत्ता ९ महिना पहिले
प्रविधिमैत्री सेवामा जोड दिनुपर्छ : प्रहरी नायब महानिरीक्षक अधिकारी २ वर्ष पहिले
पहिरो ९ महिना पहिले